Gịnị Mere Ndị Mmadụ Ji Agha Ụgha? Ọ̀ Ka Bara Uru Ịna-akwụwa Aka Ọtọ?
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Batak (Toba) Bislama Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hiri Motu Hungarian Iban Ibanag Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Lamba Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Maltese Mam Maya Mazatec (Huautla) Mende Mixe Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Ngangela Ngangela Nias Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Saramaccan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Vietnamese Wallisian Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
E nwere otu nwoke aha ya bụ Hitoshi. Ọ na-arụ na ngalaba na-edekọ mkpata na mmefu n’otu ụlọ ọrụ na-achọtara ndị mmadụ ọrụ na Japan. Mgbe ya na otu n’ime ndị isi ha na-eleba anya n’akwụkwọ ha ji edekọ ego, onyeisi ha ahụ gwara ya ka o dee ego ole dị́ iche n’ihe ha gbakọtara. Hitoshi gwara ya na akọnuche ya agaghị ekwe ya dee ihe na-abụghị eziokwu. Onyeisi ya ahụ gwaziri ya na ọ ga-achụ ya n’ọrụ. O mechakwara chụọ ya n’ọrụ.
Mgbe ọnwa ole na ole gachara, obi jọwara Hitoshi njọ n’ihi na ọ maghị ma ọ̀ ga-achọtakwa ọrụ ọzọ. N’otu oge ọ gara ka ụlọ ọrụ na-ewe mmadụ n’ọrụ gbaa ya ajụjụ ọnụ, ọ gwara onye na-agba ya ajụjụ ọnụ na ya agaghị arụ ọrụ ọ bụla a na-anaghị akwụwa aka ọtọ na ya. Onye ahụ gwara ya na ọ maghị ebe a nọ. Ndị ezinụlọ Hitoshi na ndị enyi ya gbara ya ume ka ọ nọgide na-akwụwa aka ọtọ. Ma, o bidoro nwewe obi abụọ. O kwuru, sị: “M bịara na-eche ma ọ̀ ka baara m uru ịna-agwa ndị ọzọ na m na-enwe mmasị ịkwụwa aka ọtọ.”
Ihe a mere Hitoshi gosiri na ọ bụghị mmadụ niile na-enwe mmasị ịkwụwa aka ọtọ. Ụfọdụ ndị na-ewere na ịkwụwa aka ọtọ ga-eme ka ahịa ha ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ha na-eme na-agba ọnyụpaa. Otu nwaanyị na Saụt Afrịka kwuru na ndị ha na ya na-arụkọ ọrụ anaghị akwụwa aka ọtọ nakwa na mgbe ụfọdụ, ọ na-afọ obere ka o mee ka ọ ghara ịkwụwa aka ọtọ.
O nwere ọtụtụ ihe mmadụ ga-eme, a sị na onye ahụ akwụwaghị aka ọtọ. Otu n’ime ha ndị mmadụ kacha eme bụ ịgha ụgha. O nwere ihe Robert S. Feldman na ndị òtù ya chọpụtara n’otu nchọnchọ ha mere n’afọ ole na ole gara aga. Nwoke a bụ ọkà n’akparamàgwà mmadụ. Ha chọpụtara na ụzọ isii n’ime ụzọ iri ndị dimkpa nọ́ n’ụwa na-agha ụgha, ma ọ́ dịghị ihe ọzọ, otu ugboro n’ime nkeji iri ọ bụla ha na mmadụ kparịtara ụka. Feldman kwuru, sị: “Ihe a anyị chọpụtara tụrụ m n’anya. O nweghị onye n’ime anyị tụrụ anya na ndị mmadụ ga na-agha ụgha otú a.” Ị̀ hụlanụ na ụgha a ndị mmadụ na-anaghị achọ ka a ghaara ha, so n’ihe ọjọọ ha kacha eme taa?
Gịnị mere ọtụtụ ndị taa ji agha ụgha, ezu ohi, emekwa ihe ndị ọzọ na-egosi na ha anaghị akwụwa aka ọtọ? Olee ihe akwụwaghị aka ọtọ nwere ike ịkpatara anyị? Ajụjụ kadị mkpa bụ, olee otú anyị ga-esi na-akwụwa aka ọtọ n’ihe niile?